Best Canal Ary River Boat Holidays In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Canal Ary River Boat Holidays In Eoropa
(Last Nohavaozina: 12/03/2021)
Mpitety mitady ny tsara indrindra sy ny Lakandranon'i River Boat Holidays any Eoropa dia afaka fitsaharana mora mahafantatra Eoropa manana mampitolagaga zava. Na izany aza, izay tokony handeha ho amin'ny tsara indrindra mandeha sambo fialan-tsasatra mandrakizay, tsy maintsy manao fikarohana. Misy firenena dimy amin'ny Canal mahafinaritra sy ny fialan-tsasatra riverboat safidy.
Azonao atao ny mitsidika azy rehetra, na mifidy ny iray izay, ka tena tianao. Inona no azo antoka fa ianao dia handeha manana Canal malaza sy ny ony mitaingina ireo fety. Ireto misy dimy ny ambony sy ny tsara indrindra Canal riverboat fety any Eoropa:
1. Canal sy River Boat Holidays in Frantsa
Frantsa dia maro tsara tarehy tany amin'ny toerana azo atao ny fantsona na riverboat fialan-tsasatra. Vitsivitsy ny Frantsa ny faritra hijoro ao amin'io lafiny io: ny Midi, ny faritr'i Aquitaine, ary ny Camargue. Tsirairay amin'izy ireo dia manana toetra miavaka.
Ny voalohany dia Canal du Midi, ny World Heritage Site sy ny tranainy indrindra any Eoropa solon renirano izay mbola manaraka ny Mazava ho azy tany am-boalohany. Ity asan'i Pierre Paul Riquet ity dia vita tamin'ny 1681. Teny an-dalana, cruising nidina ny Midi, hitanao Le Somail sy Carcassonne, tanàna kely roa mahafatifaty Moyen Âge. Ary raha tianao sakafo tsara ary divay lehibe, azonao atao ny manandrana ny malaza Midi Minervois sy ny Corbieres, ary cassoulet, ny sakafo an-toerana.
Southern Frantsa Camargue dia kely kokoa maoderina, talaky masoandro tsara tarehy amin'ny toetrandro sy ny akaiky Ranomasina Mediterane. Raha mandeha ianao ny Camargue, dia afaka mianatra ny toetra sy birdlife maitso mavana. Inona koa, amin'ny tanàn-dehibe misy ihany koa trano fisotroana kafe kely mahafatifaty mahita.
Farany, Aquitaine no hisambotra ny fonao rehefa Cruise alalan'ny luscious ny lohasaha, hijery ny riandrano sy mahatalanjona hantsam-bato. Misy be dia be ny lalana mba haka, anisan'izany ny sambo nidina ny Renirano Charente. any Frantsa, lalana rehetra no mandray dia ny hilaza, ary miaina izany tanteraka ny fihetseham-po no mahafinaritra.
2. Canal sy River Boat Holidays in Italia
Rehefa mieritreritra ny fantsona sy Italia, ny zavatra voalohany izay tonga ao an-tsaina dia Venice. Ny Venetian Lagoon dia be, Manapaka amin'ny lakandrano, Ary manolotra traikefa tsy manam-paharoa ho an'ny mpandeha izay tia Mitsangantsangana. Fa na dia bebe kokoa izany noho ny sambo eny Amin'ny Lakandranon'i Venise mihitsy, Italiana morontsiraka dia hanasongadinana ny tenany.
Hanombohana, dia afaka mitsidika ny hilaza izao nosy Torcello, Burano, ary Murano izay manana be dia be mba hanolotra. Raha tianao, hitoerany ela any amin'ny iray amin'ireo toeram-pivarotana maro ny manam-pahaizana manokana. Raha tsy, dia afaka foana amin'ny sambo ho any an-tanànan'i Venise mihitsy. Renirano rehetra dia tsara tarehiko any, indrindra rehefa ny andro tsara. Move hatrany River Brenta na Sile River Toerana mahafinaritra kokoa ny fitsidihana Italiana ambanivohitra.
Italia be ny nahazo hanatitra sy ny renirano tsara tarehy, ary ny Lakandranon'i Venise dia tsy maintsy-mahita. Raha te-hahita ny tsara indrindra ny Eoropeana hitan'ny olona, ​​ary tsara tarehy sakelidrano, dia hahita azy ireo any Italia.
3. Canal sy River Boat Holidays in Alemaina
Alemaina Mety tsy ho ny toerana voalohany ny hevitrao, rehefa ny tsara indrindra amin'ny lakandrano sy ny riverboat fety any Eoropa no voalaza. Na izany aza, ity firenena ity dia lavitra tsy ampy amin'ny renirano tsara tarehy mba hijery. Faritra roa mitsangana avy any amin'ny sisa: Mecklenburg sy Brandenburg, ny mahavariana lakandrano sy ny farihy voahodidin'ny ala maitso mavana.
Inona no indrindra fa mahafatifaty dia ny hoe eny an-dalana ianao dia afaka mahita mahatalanjona lapa, Moyen Âge lapa, ary quaint tanàna taloha. Ary ireo izay tia ny natiora dia tsy isalasalana fa hankafy ny ala tsy voaroaka ary harena amin'ny bibidia.
Berlin no efa tetezana kokoa noho ny Venice na dia manao, ary efa ho 100 lakandrano mba hijery. Na izany aza, ny alemà lakandrano sy ny fialan-tsasatra riverboat traikefa nahafinaritra koa mety hitondra anareo ho any Potsdam sy Brandenburg. Tandremo sao tsy mahita ny fahafahana hijery Alemaina eto amin'ity fomba tsy manam-paharoa sy miala voly.
Belzika dia manana bonus lehibe amin'ny lafiny iray rehefa tonga amin'ny fialantsasatra tsara indrindra sy ny fialan-tsasatra amin'ny renirano any Eropa. Ity tombony no Flemish faritra sy ny hatsaran-sakelidrano. Raha ny Belza sakelidrano tsy nentim-paharazana, amin'ny heviny ny fanatitra mahatalanjona ambanivohitra manodidina, afaka tokoa izy ireo hitondra anao any amin'ny toerana mahafinaritra sasany.
Ohatra, Bruges dia mendrika tokoa mitsidika, ary trandrahana izany amin'ny alalan'ny lakandrano mahatonga ny diany Mahafinaritra kokoa. Misy tantaram-pitiavana iray eny amin'ny rivotra Bruges, mitovy amin'ny Venice. Ary ny mahafatifaty Moyen Âge rafitra sy ny sokola fivarotana ihany no manampy ny rivotra iainana.
Avy eo misy Ypres, ny toerana mahatalanjona dikany ara-tantara feno sy tsy manam-paharoa zava Flemish, feo, ary ny tsirony. Niondrana an-tsambo ny fomba matsiro Belza tanana sôkôla, na mavitrika sy matanjaka Belza labiera. Ny firenena dia handray anao amin'ny hafaliana madio amin'ny fahatsapana rehetra.
Tsy misy lisitr'ireo Eoropa toerana tsara indrindra Mety ho tanteraka raha tsy misy ny Pays-Bas. Anisan'izany ny toerana izay manolotra ny tsara indrindra sy ny fantsona riverboat fety any Eoropa. Ny firenena ny renirano tsy maintsy hahita ny toerany ao anaty lisitra, manaitra tokony hanaovan-tsoa ho amin'ny fomba fijery, Toerana mahafinaritra lalana, ary ny mora sy ny filaminana ny mandeha sambo.
Ny Holandey ambanivohitra sy ny renirano lehibe manolotra traikefa. Angamba tsy misy toeran-kafa afaka hirehareha toy izao tanàna kely ary eo akaikin'ny fijery mahafinaritra maro be. Sary an-tsaina nentim-paharazana nandalo tarehy Anarana iombonana Windmills, amin'ny endriky ny fantatra izany ary ho firavaky. sary an-tsaina mijery ny tulips swaying ao amin'ny tsio-drivotra rehefa nandalo ny faritra Frisian.
Mikasa ny Riverboat Vacation any Eoropa? Boky Ny Fiaran-Dalamby Tapakila amin'ny Save A Train sy mankafy!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / ru mba / ja na / sy more fiteny.
#lakandrano #sambo #diany europetrains eurotrip trainjourney